MediaGet vs. μTorrent: သာ. ကောင်း၏ထားတဲ့?
က BitTorrent မှတဆင့်သာဒေါင်းလုတ်လုပ်မွေးဖွားခဲ့သည်အခါ, လူတိုင်းကအင်တာနက်ကိုမှဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်အနာဂတ်များအတွက်ရပ်တည်သောအရာကိုသိသည်။ ဒါကြောင့်သက်သေပြပေမယ့် torrent ဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်, သင်ကအထူးအစီအစဉ်လိုအပ် - torrent client များ။ အဆိုပါဖောက်သည် MediaGet နှင့် uTorrent ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ဤဆောင်းပါး၌ငါတို့သည်တလုံးတ သာ. ကောင်း၏ဘယ်အရာကိုနားလည်သွားကြသည်။
ကျနော်တို့ uTorrent နှင့်က BitTorrent နှိုင်းယှဉ်
သူတို့ download ပြုလုပ်အကြောင်းအရာကြီးမားတဲ့အမျိုးမျိုးပေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ torrent ခြေရာခံသည်ယနေ့တစ်ကမ္ဘာလုံးလူကြိုက်များကြသည်။ အဆိုပါခြေရာခံမှာရှိကိုယ်ပိုင်ဆာဗာများမဟုတ်ကြ - အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုအသုံးပြုသူများ၏ကွန်ပျူတာများကနေ loaded ဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်ကိုလည်းဤဝန်ဆောင်မှုများ၏ကျော်ကြားမှုကိုအထောက်အကူပြုရန်ဖြစ်သောကို download အမြန်နှုန်း, လျော့နည်းစေသည်။
မကြာခဏပြုလုပ်ထူထောင်ခဲ့သည့်အတွက် folder ကိုရှာတွေ့ဖို့ကြိုးစားနေ uTorrent ကို install အသုံးပြုသူများသည်။ အတွက် configuration ဖိုင်ရှာဖွေရေးထံမှကိုယ်တိုင် program ကိုဖိုင်များကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်: ဤများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကွဲပြားခြားနားနေပေမည်။ uTorrent ၏အဟောင်းတွေဗားရှင်းစနစ် drive ပေါ်တွင်ဖိုင်တွဲ "Program Files" တွင် install လုပ်ပြီးသား။ သငျသညျ3ထက်အသက်ကြီးတဲ့ client ကိုဗားရှင်းရှိပါက, ထို့နောက်သူကရှာဖွေပါ။
Torrent download မှ uTorrent သုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
UTorrent ဆော့ဖျဝဲ - ဖိုင်ခွဲဝေမှု၏လူကြိုက်အများဆုံးပုံစံတစ်ဦးက BitTorrent-ကွန်ယက်နှင့်အသုံးအများဆုံးကွန်ယက်၏ဖောက်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤလျှောက်လွှာကိုပြုလုပ်အတွက်အလုပ်က၎င်း၏လွယ်ကူခြင်း, Multi-functional ဖြစ်စေနဲ့မြန်နှုန်းမြင့်ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်ကျေးဇူးတင်အသိအမှတ်ပြုအနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ torrent client ကို uTorrent ၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုရှာဖွေကြပါစို့။
Troubleshooting Boot တက်ပြဿနာများ uTorrent
မကြာခဏဖိုင်ကိုဒေါင်းလုဒ်ကာလအတွင်းကြားဖြတ်နှင့်အတူအကျွမ်းတဝင်လျှောက်လွှာ uTorrent, ကိုအသုံးပြုသူများသည်။ အဘယ်ကြောင့်တခါတရံတွင်ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လဲ? အကြောင်းရင်းများစွာရှိပါသည်။ 1. အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ်ဦးကပြဿနာရှိပါတယ်။ ဤသည်ကိုမကွာခဏသို့သော်ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးအသုံးပြုသူမှဘာသာရပ်မဟုတ်ပါဘူး, စည်းကမ်းအဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
UTorrent program ကို update ကို
အတော်များများကအသုံးပြုသူများတက်ကြွစွာကွန်ပျူတာထဲမှာလိုအပ်သောဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန် torrent client များအမျိုးမျိုးကိုအသုံးပြုပါ။ ယင်း၏မျိုး၏လူကြိုက်အများဆုံးအစီအစဉ်များတစ်ခုမှာ uTorrent မှစဉ်းစားသည်။ သူမသည်မှန်မှန်င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ပေါ်ထွက်လာသောပြဿနာများဆုံး, အပြီးသတ်။ ဒါဟာအခမဲ့လို့ Torrent ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းကို upgrade လုပ်ဖို့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်, ကိုအောက်တွင်ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။
Bug uTorrent «ကြောင်းမှကြိုတင်မတပ်ဆင်ရသေးဖြေရှင်းနိုင် "
UTorrent အမှားအတူလုပ်ကိုင်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ", ထိုရန်ကြိုတင် install လုပ်ထားမထားဘူး" နှင့် Interrupt ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုတ်ဆွဲခဲ့လျှင်၎င်းသည်ဖိုင်တွဲထားတဲ့သူကဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်မှဆိုလိုသည်, ထိုပြဿနာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ပြင်ပ hard disk ကိုဒါမှမဟုတ် flash memory ကိုမှဒေါင်းလုပ်ရသောအခါဤသို့သောအများအားဖြင့်တွေ့ကြုံတတ်၏။ ဒါဟာခရီးဆောင်အလတ်စားပိတ်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှိမရှိစစ်ဆေးနိုင်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
က BitTorrent သုံးပြီးဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွေစဉ်အတွင်းနိုင် uTorrent client ကိုကျွန်တော်တခါတရံ Tooltip နှင့်အတူအနီရောင်သတိပေးအိုင်ကွန်၏အောက်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်မှာကြည့်ရှု "ဆိပ်ကမ်း (ရရှိနိုင်ပါသည်ဒေါင်းလုပ်) ဖွင့်လှစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ " ကျနော်တို့ကဒီဖြစ်ပျက်နေသည်အဘယ်ကြောင့်နားလည်ရန်ကြိုးစားပါ, ထိုသို့ဘာလုပ်ပါဘူး။ အများအပြားရှိနိုင်ပါသည်။
ဘာဂ် uTorrent « disk ကိုရေး access ကိုငြင်းဆို»
ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်တဲ့အခါမှာတစ်ခါတစ်ရံ uTorrent အတွက် disk ကိုမှမှားယွင်းမှုတစ်ခုရေးရ။ ဤသည်တို့ကြောင့်အဆိုပါဖိုင်ရွေးချယ်ထားသောဖိုင်တွဲလက်လှမ်း၏ညာဘက်ကန့်သတ်ထားပါသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဖွစျသှား။ သငျသညျအခွအေနထဲကနည်းလမ်းနှစ်ခုသွားနိုင်ပါတယ်။ ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်းခြောငျး client ကိုပိတ်လိုက်ပါ။ မိမိအတံဆိပ်ပေါ်မှာ right click နှိပ်ပြီးမသွားပါ "Properties ကို။ "
UTorrent ၏ Analogues
UTorrent ယနေ့ခြောငျး (p2p) ကွန်ရက်မှာဖိုင်တွေကို download လုပ်ပါမှလူကြိုက်အများဆုံးဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် client ကို၏ Analogues ရှိပါတယ်ဖြစ်စေမြန်နှုန်းသို့မဟုတ်အသုံးဝင်မှုရှိစေရန်အသုံးပြုပုံသူ့ကိုယုတ်ညံ့သည်မဟုတ်။ ယနေ့ကြှနျုပျတို့အနည်းငယ် "ပြိုင်ဖက်" Windows အတွက် uTorrent ကိုကြည့်။ developer များအားဖြင့် torrent က BitTorrent client ကို uTorrent ။
တစ်ဦး torrent client ကို uTorrent အတူလုပ်ကိုင်မကြာခဏဖြစ်တဲ့အခါအခြေအနေကိုအစီအစဉ်ကိုမည်သည့်အတွက်အခါ executable file ကို uTorrent.exe အပေါ်တစ်ဦးဖြတ်လမ်းကနေဒါမှမဟုတ်တိုက်ရိုက် double click နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သော်လည်းကောင်း run ချင်ကြဘူးပေါ်ပေါက်။ ကျွန်တော်တို့ကို uTorrent အလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်အဓိကအကြောင်းရင်းများဆန်းစစ်ကြပါစို့။ ပထမဦးဆုံးနှင့်အသုံးအများဆုံးအကြောင်းပြချက် - သင်လျှောက်လွှာဖြစ်စဉ်ကို uTorrent ကိုပိတ်လိုက်ပြီးနောက်။
ကြော်ငြာအစီအစဉ်အတွက် uTorrent ကို Disable
Built-in ကြော်ငြာ၏ရှေ့မှောက်တွင်အမျိုးမျိုးသောအစီအစဉ်များအတွက်လူအတော်များများလည်းဆိုးကျိုးဖြစ်စေသည်။ အပြင်ကအားသာချက်နှင့်အတူအသုံးပြုရနိုင်သည့်နေရာကြာနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကို distracts ။ ကြော်ငြာ့ရှေ့မှောက်တွင်နီးပါးကမ္ဘာ့ရေပန်းအစားဆုံးက BitTorrent client ကို uTorrent ၏တစ်ခုတည်းသောအားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
UTorrent အတွက်အမှားက c cache ကိုပိတ်ဆို့မှုကိုဆုံး
အဆိုပါ uTorrent လျှောက်လွှာနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါကထို program ကို run နှင့်အတူပြဿနာ, ဒါမှမဟုတ်အသုံးပြုခွင့်များပြည့်စုံငြင်းပယ်ဖြစ်စေ, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအမှားတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ ဒီနေ့ဘယ်လိုအခြားဖြစ်နိုင်ခြေ uTorrent အမှား fix ရန်သင့်အားပြောပြလိမ့်မယ်။ သူတို့က cache နဲ့မက်ဆေ့ခ်ျ« Disk ကို cache ကို 100% ပိရိုက်တဲ့ပြီးရင်နှင့်အတူပြဿနာကိုဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။ "
UTorrent နှင့် MediaGet နှိုင်းယှဉ်
Torrent ခြေရာခံသင်သည်များစွာသောအင်တာနက်အသုံးပြုသူများအတွက်ယနေ့လူကြိုက်များတဲ့အကြောင်းအရာအမျိုးမျိုး, ဒေါင်းလုတ်လုပ်ခွင့်ပြုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အဓိကနိယာမကိုအခြားလူများ, မဆာဗာကနေကွန်ပျူတာကနေဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ်ဆွဲသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤသည်အများအပြားအသုံးပြုသူများကိုဆွဲဆောင်သောဒေါင်းလုပ်အမြန်နှုန်းတိုးပွားစေပါသည်။
တိုးတက်သော download, uTorrent ကို configure လုပ်နည်း
ဖိုင်ကို-sharing အပြင်, အရေးအပါဆုံး function ကိုအမှတ်စဉ် torrent download, ဖိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါင်းလုပ်အခါ client program တစ်ခုကိုအလိုအလျောက်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့အပိုင်းပိုင်းရွေးချယ်သည်။ စည်းကမ်းနှင့်အမျှရွေးချယ်မှုသူတို့ရရှိနိုင်ပါသည်ရှိမရှိပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အများအားဖြင့်အပိုင်းအစများကျပန်းနိုင်ရန်အတွက် loaded နေကြသည်။ volume ဖိုင်ကိုတစ်ဦးအနိမ့်မြန်နှုန်းမှာဒေါင်းလုတ်လုပ်ပါက, ်ပြီး boot order ကိုအရေးကြီးသောအပိုင်းအစများမဟုတ်ပါဘူး။
ဒါကြောင့်အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်နှင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦး-ဖော်ရွေ interface ကိုရှိပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကြောင့်လူကြိုက်အများဆုံး uTorrent က BitTorrent client ကို။ နေ့စွဲရန်, ဖောက်သည်အသုံးအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်နှင့်အင်တာနက်ပေါ်မှာရှိသမျှခြေရာခံကထောက်ခံသည်။ ဤဆောင်းပါး၌, ဤလျှောက်လွှာကို configure ၏ဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြထားပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအတော်လေးရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကြောင်းကိုမှတ်သားရပါမည်။
ရေစီးခြင်းကြောင့် uTorrent ဒေါင်းလုပ်များအတွက် program တစ်ခုဖျက်ခြင်း
တခါတရံသင်သည် software ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုမသာကိုသိရန်, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ဤကိစ်စတှငျခြောငျး clients များမပါချွင်းချက်ရှိပါတယ်။ ဖယ်ရှားရေးများအတွက်အကြောင်းပြချက်ကွဲပြားခြားနားဖြစ်နိုင်သည်စသည်တို့ကိုမမှန်ကန်ကြောင်းတပ်ဆင်ခြင်း, တစ်ဦးထက်ပိုသောအဆင့်မြင့် program ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တစ်ဦးအလိုဆန္ဒရဲ့ client ကို၏လူကြိုက်အများဆုံးဖိုင်-sharing ကွန်ယက်၏စံနမူနာအပေါ်ခြောငျးဖယ်ရှားပစ်ရန်မည်သို့မည်ပုံကိုကြည့်ပါစို့ - uTorrent ...
https://termotools.com my.termotools.com © UTorrent 2019